စက်ဘီးမြို့တော် Amsterdam အကြောင်း လေ့လာခြင်း – bikesinygn မှ လေ့လာတင်ပြသည် – – Bikes in Ygn
စက်ဘီးမြို့တော် Amsterdam အကြောင်း လေ့လာခြင်း – bikesinygn မှ လေ့လာတင်ပြသည် –
စက်ဘီးမြို့တော်ဖြစ်မလာခင်ကာလအကြောင်း Amsterdam မြို့သားတစ်ယောက်ရဲ့ ပြောပြချက်
၁၉၅၀ နောက်ပိုင်းတွမှာပေါ့။ အဲ့ဒီ့အချိန်တွေတုန်းက Amsterdam မှာ စက်ဘီးစီးတဲ့သူ တစ်ယောက်တစ်လေတောင် မရှိသေးပါဘူး။ မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ ကားတွေက ငါတို့ရဲ့ အနာဂါတ်ဖြစ်နေတယ်လေ။ ဒီနေရာမှာ ကားတွအကြောင်းကို မြို့သူမြို့သားတွေကြားမှာ ဒီအကြောင်းတွေ ပြည့်နှက်သွားတာကတော့ ၁၉၆၀ နှစ်များမှာပေါ့။ ကားတွအကြောင်းဆိုတာက မြေနေရာတိုင်းဟာ ကားရပ်ဖို့ နေရာတွေချည်းဖြစ်ကုန်ကြတဲ့ ကိစ္စကိုပေါ့။ စက်ဘီးရပ်စရာ နေရာဆိုတာ မရှိသလောက်ကိုလေ။
လူတိုင်းအတွက် ကားတွေက အရာရာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့။ အဝေးပြေးကားလမ်းမကြီးတွေကို မြို့လည်ခေါင်တွေမှာပါ တည်ဆောက်လာတဲ့ နှစ်ကာလတွေပေါ့။ မင်းတို့ သိရင်လည်း သိခဲ့ကြလိမ့်မယ် ကလေးတွေအများကြီးဒီ လမ်းမတွေပေါ်မှာ ယဥ်မတော်တဆမှုနဲ့ သေဆုံးခဲ့ကြတယ်။
လူထုပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့ မြို့ပြတည်ဆောက်ရေး အရွေ့
လူတွေ တဖြည်းဖြည်း အသိတရားဝင်လာကြပြီး မြို့လူထု ၇၀% လောက်က ဒီကိစ္စတွေကို အဆုံးသတ်ဖို့ ဆန္ဒရှိလာကြတယ်။ ဒါကြောင့် မြို့တည်ဆောက်သူတွေဟာ မြို့တွင်းမှာ ကားလမ်းမတွေ ထပ်တိုး ထည့်ဝင်တိုးချဲ့မှုတွေကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြတယ်။ ဘာလို့ဆို မြို့လည်ခေါင်က အမြန်သွားကားလမ်းမတွေကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာတွေကို လူတွေ လက်မခံနိုင်တော့ကြတဲ့နောက် သူတို့မှာ အပြောင်အလဲတစ်ခု စတင်ဖို့ ဖန်လာပြီလေ။
(ကားတွေဆိုတာ လိုအပ်ပါတယ်။ ဝေးလံတဲ့ တစ်နေရာကတစ်နေရာ တစ်မြို့ကနေ တစ်မြို့သွားဖို့အတွက် လိုအပ်ပါတယ်။ သတို့ပေတိ လူအများကွန်းခိုရာ မြို့အဝန်းအဝိုင်းများမှာ လူတိုင်းကား စီးလာရင်တော့ ကားတွေအတွက်နေရာပေးရတာ ကားလမ်းလုရတာနဲ့ ပဲ လူသားဆန်မှုနဲ့ အေချမ်းတဲ့ လူမှုဘဝနရီတွေပျောက်ဆုံးကုန်တာကို ကျွန်တော်ခံစားမိတယ်။ Amsterdam မြို့သားတွေလည်း ခံစားမိကြတယ်။ မင်းရော ခံစားမိလား။)
၁၉၇၀ မှာ ဒီအပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပေါ့။ မြို့ကို ခြောက်လမ်းသွား ကားလမ်းမတွေက စက်ဝိုင်းပတ်ပတ်ထားတယ်။ လမ်းသွယ်တွေက အဲ့ဒီ့ မြို့ပတ်လမ်းကြီးနဲ့ သွယ်ဆက်ထားတယ်။ နေရာတိုင်းကို ကားနဲ့ အလွယ်လေး ရောက်နိုင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ Amsterdam မြို့သားတွဟာ မြို့ဟာ ဘယ်လိုဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာကို နားလည်ခဲ့ကြတယ်။
စဥ်းစားဖြေရှင်းကြတဲ့ မြို့သူမြို့သားများ/ စက်ဘီးများနဲ့ လှပလာတဲ့ Amsterdam
လူတိုင်းက ကားတစ်စီး သုံးနေကြမယ်ဆိုရင် မြို့က အလုပ်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ကားတွက ဆူညံတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေတယ်။ သူတို့ကို ထားဖို့ နေရာတွေ အများကြီးလိုအပ်တယ်။ ပြီးတော့ ယဥ်တိုက်မှုတွေက အန္တရာယ်များလွန်းလှတယ်။
ငါတို့ ဘာလုပ်ကမလဲဆိုရင် ဘယ်သူမဆိုဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် စက်ဘီးစီးတဲ့ သူတွေအတွက် အဆင်ပြတဲ့ စက်ဘီးလမ်းတွေ စီစဥ်ရမယ်။
ခုဆို ငါတို့ လမ်းတွေပေါ်မှာ ကားတွေ၊ စက်ဘီးတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေ အကုန် သွားလာနေကြပေမဲ့ လူတွေ လမ်းလျှောက်ရ အဆင်ပြေတယ်။ ဘာလို့ဆို လမ်းတွေပေါ်မှာ ကာတွေက အမြန်မမောင်းကြဘူး။ စက်ဘီးတွေကတောင် ကားတွေထပ်ပိုမြန်ရင် မြန်လိမ့်အုံးမယ်။
လူတိုင်းက ဒီလိုပဲ အေးအေးဆေးဆး သွားလာနေကြတယ်။ အားလုံးက လူသားဆန်ကြပြီး နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းကြတယ်။
အဓိကလမ်းမကြီးတွေမှာတော့ ကားတွေက နည်းနည်းမြန်မြန် ပိုမောင်းဖို့ လိုတယ်လေ။ အဲ့အတွက် ငါတို့ဆီမှာ ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့ ကားလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ စက်ဘီးလမ်းနဲ့ ကားလမ်းနဲ့ကို ၆ ပေကနေ ၈ ပေလောက်အထိခွာထားတယ်။ စက်ဘီးတွေအနေနဲ့ ကားအန္တရာယ်ကို စိုရိမ်နေစရာမလိုဘဲ တန်းတန်းမတ်မတ် သွားလာနိုင်တယ်။
ဒီစနစ်ကဆိုရင် သွားဖို့အတွက် စက်ဘီးစီးသူအားလုံအတွက် အဆင်ပြေစေတယ်။ စက်ဘီးစီးတဲ့ ဖိုးဖိုး ဖွားဖွားအတွက်ကစလို့ ကလေးမိခင်တွေ နဲ့ ကလေးတွေ၊ အတွက်ပါ စက်ဘီးစီးဖို့ အဆင့်ပြေအောင် လုပ်ပေးထားတယ်။ စက်ဘီးစီးသူတွေက အမြန်ကြီးမစီးကြသလို ရိုးရှင်းတဲ့ နေ့စဥ်သုံး စက်ဘီးတွေကို ပဲ စီးကြတယ်။ ကလေးနဲ့ စက်ဘီးစီးနေသူတွေကိုဆို အားလုံးက ဦးစားပေးကြတယ်။
ဒီနေရာကတော့ Amsterdam မြို့လေးမှာ စက်ဘီးအရှုပ်ဆုံး လမ်းဆုံပဲ။ ကားအရှုပ်ဆုံး လမ်းဆုံ ဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီလမ်းဆုံရဲ့ အောက်မှာ မြေအောက်ရထား ပြေးလိုင်းလည်းရှိတယ်လေ။
အခုကစပြီး မင်းမျက်စိရှေ့က ဖြတ်သွားတဲ့ စက်ဘီးတွေကို လိုက်ရေမယ်ဆို တော်တော်များများပဲဆိုတာ သိလိမ့်မယ်။ ဒီလမ်းဆုံမှာ ကားတစ်လှည့် စက်ဘီးတစ်လှည့် ဖြတ်သွားကြတယ်။ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော့ ကားတွေက ပိုများမယ်လို ထင်ရပေမဲ့ တကယ်က စက်ဘီးတွေက ပိုများတယ်။ မီးပွိုင့်မှာ ကားဖြတ်ဖို့ စက္ကန့် ၃၀ ပေးရင် စက်ဘီးဖြတ်ဖို့ စက္ကန့် ၉၀ ပေးရတယ်။
ကျပန်းဆန်ဆန် ရွေ့လျားနေတဲ့ စက်ဘီးအုပ်ကြီးမှာ သိပ္ပံစနစ်တစ်ခုရှိနေတယ်
စက်ဘီးလမ်းတွေဟာ ကျဥ်တယ်၊ စက်ဘီးတွေ ပျားပန်းခက် ဥဒဟိုသွားလာနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့ လူတွေ အတွက် ဘာမှထွေထွေထူးထူး အားစိုက်စရာမလိုဘဲ ထမင်းစာရေသောက် သွားလာနိုင်ကြတဲ့ အကြောင်းက လူတဲ့ရဲ့ ဆဠမအာရုံစနစ်ကြောင့်ပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ လူတွေထင်မှဦပဲ စက်ဘီးတစ်စီး သွားလာဖို့ သူ့တစ်ကိုယ်စာ လမ်းကျဥ်းကျဥ်းလေးပဲ လိုမယ်လို့။ တကယ်တမ်းမှာတော့ စက်ဘီးစီးတဲ့အခါ ဟန်ချက်ထိန်းဖို့အတွက် အကျယ်တစ်ခုလိုပါတယ်။ အဲ့တာကို စက်ဘီးစီးတဲ့ လူအချင်းချင်း နားလည်ကြတယ် သူတို့ချင်းချင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ ညှိနှိုင်းသွားလာကြတယ်။ ဘယ်ပုံဘယ်နည်း အလုပ်ဖြစ်သွားကြတယ်ကို အသေအခြာသိချင်ရင်တော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ လာပြီးဒီလူအုပ်ကြီးထဲ စက်ဘီးစီးကြည့်ပေရော့ဗျာ။
Amsterdam မှာ စက်ဘီးစီးတဲ့ လူတွေမှာ တခြားအရပ်ကလို စက်ဘီးဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေနဲ့ ရှုပ်ရှက်ခတ်မနေဘူး။ ဘယ်ကွေ့မယ် ညာကွေ့မယ်ကို လက်ကြီးတွေ ဆန့်တန်းပြီး စာအုပ်ကြီးအတိုင်း အချက်ပြမနေကြဘူး။ အေးအေးသက်သာပဲ အချင်းချင်းနားလည်ယုံ လိုသလောက် အချက်ပြယုံပဲလုပ်ကြတယ်။ ငါ ဒီဘက်ကို သွားမယ်ပေါ့၊ ငါ ဟိုဘက်ကို သွားမယ်ပေါ့။ အချင်းချင်း ဒတ်ကြတယ်။ အားလုံးက အချိန်တိုင်းလိုလို စက်ဘီးတွေနဲ့ သွားလာနေကြတာဆိုတော့ လူတွေ စက်ဘီးပေါ်မှာ ကုန်တဲ့အချိန်တွေကလည်း မနည်းကြဘူး။ စက်ဘီး လက်ကိုင်ချင်း တိုးမိတိုက်မိတာလောက်ကတော့ အားလုံးအတွက် ဘာမှအထူးတဆန်းမဟုတ်ဘူးဗျ၊ အလန့်ထညက်လဲမဖြစ်ကြသလို ဘွေလည်းမယူကြဘူး။ ကန်တော့နော်လို့ ပြောလိုက်ပြီး ပြီးသွားတာပါပဲ။ (ဘိုလိုတော့ excuse me ပေါ့)
ဒီက အခြေအနေသာ အမေရိကန်မှာဆို တော်တော်ကြောက်ဖို့ ကောင်းတဲ့အခြေအနေလို့ သုံးသပ်ကြမှာ။ ဒီမှာ ဘာမှာ မထိန်းချုပ်ထားဘူး၊ အချက်ပြမီးလည်း မရှိဘူး။ အားလုံးက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မျက်ရိပ်ပြပြီး အိုကေနေကြတာပါပဲ။ တကယ့်ကို ပရမ်းပတာပါပဲ။ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြောပါ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာတော့ အလုပ်ဖြစ်သဗျ။ အားလုံးက ဒီလို ပရမ်းပတာကြီးထဲမှာ ဘယ်လို သွားရမယ်ဆိုတာကို သိကြတယ်။
လမ်းတွမှာ မီးပွိုင့်တွမရှိဘူး။ လူတွေက လူလူချင်း ယုံကြည်မှုရှိကြတယ် စက်ဘီးပေါ်ကလူတွေကိုရာ ကားပေါ်ကလူတွေကိုရော အားလုံး အချင်းချင်းယုံကြတယ်။ အချင်းချင်းတစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်လှမ်းကြည့်ပြီး အချက်ပြလိုက်ကြ၊ လက်လေးနဲ့ အချက်ပြလိုက်က တကယ့်ကို ဟုတ်နေတာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ကဒါကို အရမ်း ဂုဏ်ယူတယ်။ ကျွန်တော့အထင်တော့ Amsterdam ကလမ်းတွေပေါ်မှာ စက်ဘီးစီးရင်း သွားလာတဲ့ အခါ လူသားဆန်မှုကိုပိုပြီး ခံစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကမ္ဘာပေါ်မက ဘယ်နေရာထက်မဆိုပေါ့။
အမေရိကန်ကနေ နယ်သာလန်ကို ရောက်လာတဲ့ စက်ဘီးစီးသူတစ်ယောက်
Amsterdam ကိုရောက်ရောက်ချင်းပဲ ကျွန်တော် ဈေးပေါပေါ တစ်ပတ်ရစ် စက်ဘီးတစ်စီးကို ဝယ်လိုက်ပြီး မြို့ထဲမှာကို ထွက်လာလိုက်တယ်။ ဒီမှာ စက်ဘီးစီးရတဲ့ ခံစားချက်ကို ကျွန်တော် အရမ်းသိချင်နေမိတာ။ ထင်တဲ့အတိုင်ပဲ ကျွန်တော် တကယ် ထူးခြားတဲ့ ခံစားချက်တွေ ရလိုက်တယ်။ စက်ဘီးစီး အားကစာသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့တောင် ဒီကလမ်းမတွေပေါ်မှာ စက်ဘီးစီးရတဲ့အခါ ထူးခြားတဲ့ ခံစာချက်တွေ ရတယ်ဗျ။ လူတိုင်းက စက်ဘီးတွေစီးပြီ သူတို့ရဲ့ အလုပ်၊ ကျောင်း၊ ဈေး သွားလာနေကြတယ်။ ကလေးတွေနဲ့ လည်း စက်ဘီးစီးပြီးသွားနေကြတာပါပဲ။ ကမ္ဘာကြီးမှာ အရာရာက သူ့အလိုလို စီးဆင်းနေသလိုပဲလို့ ခံစာမိတယ်။
ကျွန်မ အရင်က အမေရိကနဲ့ အင်ဂလန်မှာ ၆ နှစ်လောက်နေခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့အိမ်မှာ လူနှစ်ယောက်အတွက် ကားနှစ်စီးသုံးတယ်။ ကျွန်မကတော့ ဘတ်ထရီပါတဲ့ စက်ဘီးနဲ့ နေ့တိုင်းသွားလာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ Amsterdam ရောက်တော့ ကျွန်မတို့အိမ်မှာ လူနှစ်ယောက်အတွက် စက်ဘီးသုံးစီးရှိတယ် ကားမသုံးတော့ဘူး။
Amsterdam ကို ကျွန်တော် စရောက်တဲ့ တစ်မနက်၊ ကျွန်တော် ကျောင်းကို စက်ဘီးစီးသွားတယ်။ လမ်းမှာ ဖြတ်ရတဲ့ ဥမင်လှိုင်ခေါ်င်းနားမှာ ရပ်ပြီး စက်ဘီးစီးတဲ့ လူတွေကို ရေတွက်ကြည့်မိတယ်။ ဒီဥမင်လှိုင်ခေါင်းကျဥ်းကျဥ်းလေးထဲက မိနစ် ၂၀ အတွင်း စုစုပေါင်း ၉၂၇ ယောက် ထွက်လာတယ်။ တစ်ခါက dutch တွေက “မင်းဘာလို့ အမေရိကားကနေ amsteram ကို ပြောင်းလာတာလဲလို့” မေးတော့ ကျွန်တော်က “ငါ မိနစ် ၂၀ အတွင်းမှာ စက်ဘီးစီးတဲ့သူ ၉၂၇ ယောက်ကို တွေ့လို့” လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။
စက်ဘီးအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ Amsterdam မှာ အံသြစရာ အချက် နှစ်ချက်ရှိတယ်
တစ်ချက်က သူတို့ မြို့က လူတွေက စက်ဘီးပေါ်မှာ ကြီးလာကြတာရယ်။ သူတို့ မိဘတွေ ရဲ့စက်ဘီးတွေပေါ်မှာ လိုက်စီးရာကနေ သူတို့ကိုယ်တိုင် နေ့စဥ် စက်ဘီးတွေစီးပြီးသွားလာနေကြတဲ့ လူတွေဖြစ်လာကြတယ်။ သူတို့မှာ မဟုတ်ရင် ဘယ်သူတွေကများ စက်ဘီးစီးသများကောင်းတွေ ဖြစ်ကြမှာလဲ။
နောက်တစ်ချက်က သူတို့ရဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံပါ။ တခြားနေရာတွေမှာ ကားပေါ်မှာ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ ကိစ္စတွေအားလုံးကို သူတို့ စက်ဘီးပေါ်မှာ လုပ်ကြတယ်။ ဖုန်းပြောတယ်၊ ပစ္စည်းသယ်တယ်၊ ကလေးတွေနဲ့သွားတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကို ကားပေါ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စက်ဘီးပေါ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ အဓိကကွာခြားချက်က စက်ဘီးနင်းရင်း လမ်းပေါ်မှာ မတော်တဆ မှုဖြစ်စေခဲ့ရင် သူတို့ပဲ ထိခိုက်နိုင်တာကလွဲလို့ တခြားလူတွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် ဘာမှ ကြီးကြီးမားမား ထိခိုက်စေနိုင်တာ မရှိဘူးဆိုတာပဲ။ ကားတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ ဆိုးရွားတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရလာဒ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လေ။
Amsterdam ကလူတွေက သူတို့မှာ ဒီလိုထူးခြားတဲ့ စက်ဘီးစီးတဲ့ ယဥ်ကျေးမှုရှိနေတဘ်ဆိုတာကို သတိမထားမိကြဘူး။ ဒါက သူတို့ရဲ့ နေ့စဥ်ဘဝဖြစ်နေတဲ့ ဘာမှ ထူးဆန်းတဲ့အရာ်ဟုတ်တော့ခြင်းပဲ။ အကယ်၍ မင်းက dutch တစ်ယောက်ကို မင်းတို့ဆီက စက်ဘီးစီးတဲ့ ဓလေ့က အတော်ချစ်စဖွယ်ပဲလို့ပြောရင် … အင်း မင်း ဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲ ငါ မသိဘူး လို့ ပြန်ဖြေပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့ဆို dutch တွေအနေနဲ့က စက်ဘီးစီးတဲ့ ယဥ်ကျေးမှုက subculture ဖြစ်တယ်လို့ ခံယူတယ်။ သူတို့ဆီမှာ ဒါက ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဥ်ပဲ ဖြစ်ပြီး ဘယ်သူကမှ အထူးတလဲ ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်မနေကြပါဘူး။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တော့ သိပ်ကောင်းတဲ့ နေ့စဥ်ဘဝပုံစံပေပဲနော့။
(subculture:acultural group withinalarger culture, often having beliefs or interests at variance with those of the larger culture။ subculture ကို စာရေးသူအနေနဲ့ ဘယ်လိုဘာသာပြန်ရမယ် မသိပါဘူး။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စကားလုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက် ရမ်းသမ်းပြီးလဲ မပြန်ဝံ့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဘာသာမပြန်ဘဲ မူရင်းအတိုင်းထည့်သွင်း သုံးစွဲလိုက်ပါတယ်။ ဆိုလိုလျင်တဲ့သဘောကတော့ စက်ဘီးယဥ်ကျေးမှုလို့ ခေါင်းစဥ်တစ်ခုထဲနဲ့ သိမ်းကြုံးပြောလို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ ဘာလို့ဆို စက်ဘီးယဥ်ကျေးမှုဆိုတဲ့ ခေါင်းစဥ်အောက်မှာကိုပဲ မတူညီတဲ့ ယဥ်ကျေးမှုပုံစံတွေရှိနေလို့ပဲတဲံ။ ကျွန့်တော့ နားလည်မှု အမှတ်မှားတာရှိရင် ထောက်ပြဝေဖန်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ရပ်ကွက်ထဲမှာ စက်ဘီးစီးတဲ့ သာမန်ကောင်လေးတစ်ယောက်ပဲမို့ပါ။)
ခြောက်နှစ်သား မြို့ပြ စက်ဘီးသမား
ကျွန်တော် ကလေးတွေနဲ့အတူ တစ်နေ့ကို တစ်ကြိမ် ဒါမှမဟုတ် နှစ်ကြိမ်လောက်တော့ စက်ဘီးနဲ့ သွားလာဖြစ်တယ်။ ဒါက ကျွန်ရဲ့ တစ်နေ့တာမှာ ပျော်စရာအချိန်ပေပဲ။ ကျွန့်တော့် သားလေးက အခု ခြောက်နှစ်နဲ့ တစ်လ၊ သူအခု လမ်းပေါ်မှာ စီးဘီးစီးပြီး သွားတတ်နေပြီ။ အစက စက်ဘီးမှာ တပ်တဲ့ ကလေးထည့်တဲ့ ပုန်းနဲ့ လိုက်စီးတယ်၊ နောက် လက်ကိုင်ပေါ်မှာ လိုက်စီးတဲ့အရွယ်ဖြစ်လာတယ်။ သူတို့ စက်ဘီးတွေ လမ်းပေါ်မှာ ဘယ်လိုသွားလာကြတယ်ဆိုတာကို မြင်ပြီး ဘယ်ကို ဘယ်အချိန်မှာသွားတယ် ညာကို ဘယ်အချိန်မှာ ကွေ့တယ် အချက်ပြစနစ်တွေ ဘယ်လိုရှိတယ် စသည်ဖြင့် တဖြည်းဖြည်း ဒီစန်စကြီးတစ်ခုလုံး ဘယ်လို အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို တတ်သွားကြတာပါပဲ။ အခုဆို ကျွန်တော့သား ပက်စကို က ခြောက်နှစ်သား၊ သူ ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ မြို့တွင်းမှာ စက်ဘီးနင်းနိုင်သူတစ်ယောက် ဖြစ်နေပါပြီ။
To read more articles. Click here!
Bikes in Ygn isateam of young people from Yangon, who are doing “Advocacy Campaign” to raise awareness about eco-friendly utility cycling culture.
February 18, 2017 by ZwePyae